Abwaanka Puntland iyo Faarax Cabduqaadir maxay maanta ka simanyihiin? – Radio Daljir
Janaayo 2, 2019 6:25 g 1
Inta siyaasadda Fadaraalka ku garabrarata uma baahna hordhac iyo waa kuma Faarax Cabduqaadir. Inta ka dhacsan siyaasadda Puntland, abwaanka Puntland dadka qaar baa yiraahda waa Faarax Cabduqaadirka Madaxweyne Gaas.
Saas oo giraantu tahay, Faarax Cabduqaadir waxa uu waagii Xasan Shiikh isku sharraxay Guddoomiye Kuxigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Dowladda Fadaraalka Soomaaliyeed (DFS). Sida la soo wariyey waagaas Madaxweyne Xasan Shiikh waa uu ka biyodiiday in saaxiibkiis, ahaana gacantiisa midig Faarax Cabdulqaadir isku sharraxo jagadaas.
Laakiin Faarax dheg jalaq uma uusan siin oo gaashaanka ayuu u daruuray talada saaxiibkiis, markaasna ahaa Madaxweynaha Jamhuudiyadda Federaalka Soomaaliya, Madaxweyne Xasan Shiikh. Faarax oo waagaas lagu tirin jiray siyaasi fiirodheer waa uu ka taladiiday Madaxweyne Xasan.
Madaxweyne Xasan taladiisu waxa ay ku salaysnayd baqdin uu ka qabay in Faarax Cabduqaadir yahay Xasan Shiikh, Xasan Shiikh asna yahay Faarax Cabduqaadir. Dhaawaca mid gaaraana uu yahay mid ay ka sinnaan doonaan. Faarax intaas isku il iyo dheg kalama uusan noqon Madaxweyne Xasan, mana uusan dareemin guuxa isa soo taraya iyo tunka biraha maaraystay.
14kii Janaayo 2017, Faarax oo codadkiisa soo tirsaday, guushana jeebka ku wata, ama sidaas u dareensan, waxa uu isku soo xaadiriyey doorashadii. Faarax waa baa ku baryey, waana laga helay doorashadii, asaga oo 97 cod helay, halka Muudeey oo guushu raacdey uu kaga helay 111 cod.
Faarax oo jabay waxa uu raadshay Madaxweyne Xasan, laakiin Madaxweynuhu baqdintiisii soo arag. Faarax asna waxa uu gadaal ka fahmay in Xasan uusan waxba u diidaneyn, laakiin uu jabka soo socda indhaha ka qarsanayey.
Xiiso ma leh in aan idin xasuusinno in baqdintii Madaxweyne Xasan uu markii hore indhaha ka qarsanayey ay soo ifbaxday doorashadii madaxweynaha ee 8 Febraayo 2017, taas oo uu wareegii koowaad Madaxweyne hore Xasan Shiikh helay 88 cod, halka uu wareegii labaad dhaafi waayey codadkii Faarax Cabduqaadir ku jabay iyo 97 cod.
Su’aasha maanta Puntland ka taagan baa haddaba ah: Madaxweyne Gaas taariikhdaas ma la qaybsaday saxiibkiis Abwaan Cabdirashid, Abwaanku se taariikhdaas ma deymooday?
Mucjisada siyaasaddu waa mid jallaafo wadatee oo sidii shalay wax loo dhigay ama loo abaabulay maanta ka duwan e, maalinka Jimcaha oo taariikhdu tahay 4 Janaayo 2019, waxaa Guddoonka Baarlamaanka ee Golaha Wakiilada Puntland u tartamaya Madaxweyne Gaas saaxiibkiis Abwaan Cabdirashid. Abwaanka oo magaciisa aan marna la saddexayn waxaa lagu soo koobaa “Abwaan Cabdirashiid!” Gaas iyo Abwaabku isku mar bay Puntland ka soo degeen, isku mar bayna Buurta wada degeen.
Haddaba saadaashu maxay ka qoraysaa doorashada koowaad oo ah tan Guddoonka Baarlamaanka?
Loolanka maanta ee Puntland, Abwaanku sidii Faarax Cabduqaadir waxa uu rabaa in uu Madaxtooyada ka sii dallaco, waxa uuna la tartamayaa rag halgamayaal ah oo dhiig iyo dheef Puntland u daadshay, qaar ehelkoodii oo dhan ku waayey, uuna ugu horreeyo Cabdi-Jamaal Cismaan Maxamed. Abwaanku waxaa kale oo uu la tartamayaa siyaasiyiin ruug caddaa ah oo uu ugu horreyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed (Dhoobo).
Haddaba inta aydan dabaysha iyo saadaasheeda farta kor ugu fiiqin, waxaa isweydiin mudan, Madaxweyne Gaas sidii Madaxweye Xasan Shiikh uu ula taliyey saaxiibkiis Faarax Cabduqaadir ma uu ula taliyey saaxiibkiis Abwaan Cabdirashid?
Jimce maalin baa naga xigta iyo doorashadda Guddoomiyaha cusub ee Golaha Wakiilada Puntland.
Warka Fiidnimo iyo Axmed Sheekeeye , Daljir Garoowe (dhegayso)
Qormadaadu waa mid aragti iyo qumanaan intaba leh. Waxaad wax ku cabirtay taariikh horey u dhacday oo mar labaad soo noqoto lagayaabo. Waxaan kaloo qormadaada ka dhandhansaday inaad Gaas kasoo horjeedid, laakiinse eray ahaan umaadan cabirin.
SI kastaba ha ahaatee, waxaan ubaahnahay qormooyin sidaan oo kale ah oo dhexdhexaada, arati dheerana leh.